“पातिले बारेको घर” दुर्गा बिरहीकाे मार्मिक अभिनयमा भिडियाे सार्वजानिक « Light Nepal
“पातिले बारेको घर” दुर्गा बिरहीकाे मार्मिक अभिनयमा भिडियाे सार्वजानिक
Published On :2May, 2019 8:06 pm
वैशाख १९ काठमाडौँ । नेपाली लोक गीत संगीतले विश्व बजारमा अत्यन्तै राम्रो चर्चा पाइरहेको छ। नेपाली लोक गीत संगीत भनेको देशको पहिचान हो र कलाकारहरु देशका गहना हुन् । केही समय देखि निरन्तर निकै संघर्ष मेहनत तन मन जीवन गीत संगीतलाई दिएर सक्रिय भएर अगाडी आउदै गरेका बहुप्रतीको धनी दुर्गा बिरही आफैमा सर्जक,गायक,मोडल, निर्देशक पनि हुनुहुन्छ।
यो समयमा बिरही दिनदिनै चर्चामा आइरहनु भएको छ। यति बेला बिरही भन्नू हुन्छ केही समयको अनुभव बुतलिसके अबको प्रस्तुतिहरु पक्कै पनि उत्कृष्ट रहने छन् । यहि क्रममा पातिले बारेको घर.. बजारमा लिएर आउदै हुनुहुन्छ। अत्यन्तै मार्मिक दर्दनाक यो गीत भिडियो दुर्गा बिरही जितन भाइ श्रीस र सुब्बा राना भाटको सहकार्यमा रहेको उक्त गीत भिडियोको टेलर सार्बजनिक गरियो । यो गीतमा अत्यन्तै चर्चित गायिका बिमा कुमारी दुराले आमाको पार्ट बाट स्वर दिनु भएको छ। खड्ग गर्बुजा चर्चित गायकले बाबाको पार्ट बाट आवाज दिनु भएको छ।
त्यसै गरि अत्यन्तै चर्चीत गायिका देबि घर्ती मगरले श्रीमतीको पार्ट बाट गाउनु भएको छ। सुमधुर स्वरको धनी हाल कोरिया बाट राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिस्थान शाखा कोरियाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। जितन भाइ श्रीसले छोराको पार्ट बाट गाउनु भएको छ। भर्खर चर्चा कमाउदै गरेको सुमधुर स्वरको धनी सुब्बा राना भाटले बिदेश पुगे पछि साथीको हालत देखि साथीको पार्ट बाट गाउनु भएको छ।
छोटो समयमा धेरै गीत गाउन र उहाको स्वर सबैले मन पराउनु भएको गायिका इन्दिरा गुरुङले बैनिको पार्ट बाट गाउनु भएको छ। यो अत्यन्तै मर्म स्पर्सी गीतको लय शब्द दुर्गा बिरही ले आफै गर्नु भएको छ। यो गीतमा मिठो संमवाद पनि बोलिएको छ। बहुचर्चित गायक रेशम सापकोटा र आसा शाहीले यो गीतमा मान्छेको मन मुटु छुने गरि बोल्दिनु भएको छ रोइ दिनु भएको छ।
जुन गीतको भिडियोमा बोल माया बाट अत्यन्तै चर्चामा रहेकी अञ्जलि अधिकारीले यहाँ पनि सबैलाई रुहाउने अभिनय गरेकी छन् । भने जताततै फिल्म कमेडी सिरेल हरेक ठाँउमा आफ्नो अभिनय देखाउनु हुने सुरबिर पण्डित (दारी बाबा र आमा रमा थपलियाले पनि निकै राम्रो बाबा आमाको भुमिका राख्नु भाको छ भने दुर्गा बिरही एक गरिब बाबा आमाको छोरा भएकोले बिदेशिदै आफ्नो अभिनय गर्नु भाको छ बिरहीको यो अत्यन्तै मार्मिक अभिनय यो भिडियो देख्न हुने छ भने गरिब पर्देशी दाजुको प्यारी बैनी एउटै बैनी चर्चित मोडेल डान्सर नुना बि.सि.ले अभिनय गर्नु भएको छ।
जुन गीत भिडियोको निर्देशन पछिल्लो समयको बहुचर्चित निर्देशक बिक्रम चौहानले गर्नु भएको छ। भने छायांकन प्रकाश खड्का ले गर्नु? भएको छ भने ड्रोन बाट सन्तोष महराले गर्नु भएको छ। धेरै अवार्डहरु हात परि सकेको मिलन बि.क. ले यो भिडियो सम्पादन गर्नु भएको छ। यो गीत भिडियोको कथा लेखन दुर्गा बिरहीले आफै गर्नु भएको छ। यो गीतको अडियो सुरताल रेकर्डिङ स्टुडियोमा भएको हो। यस गीतका एरेन्जर रमेश सेन्चुरी हुन भने मास्टरिङ्ग पनि स्वयम आफैले गर्नु भएको हो। रेकर्डिङ पवन बि.क.ले गर्नु भएको हो। यो अडियो भिडियो आत्म विस्वाश फिल्मस् प्रा.लि.ले बजारमा लिएको हो। यो निकै दर्दनाक एथार्थ गीत भिडियो सुनेर कमेन्ट शेर गर्न नछुटाउनु होला।